Andry Rajoelina Tonga manohana ny kandidan’ny IRD…
Filohan’ny Antenimieram-pirenena «Tsy hisy intsony ny gaboraraka»
Omaly no notontosaina ny famindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena vaovao Razanamahasoa Christine sy ny teo aloha Jean Max Rakotomamonjy.
Birao maharitra teo aloha Tsy nahazo nanao tatitra tao an-dapa
Taorian’ny fifamindram-pahefana teo amin’ny birao maharitra teo aloha sy vaovao eo anivon’ny Antenimieram-pirenena dia nikasa hanao tatitra momba ny asa vita na ny fe-potoana farany teo ny filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha, Jean Max Rakotomamonjy sy ny filoha lefitra faritanin’Atntsiranana Mahazoasy Freddie;
Rakotoamboa Jean Louis filohan’ny TEZA Tokony hatao ny fanorenana ifotony
Tokony hiditra amin’ny fanorenana ifotony ny fitondram-panjakana, ka havaozina avokoa ny lesoka rehetra tsy nety, indrindra fa ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny lalàn’ny serasera, ny lalàna amin’ny ankapobeny mba hanatsarana azy,
Fampihavanam-pirenena « Mbola lavitra ezaka ! »
Nalaza teo fa vitan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na ny Barea ny fampihavanam-pirenena.
Randriamanjato Liantsoa Bina «Mifanaraka amin’ny MAP 2 ireo tolo-dalàna haroso»
Ny distrikan’Andramasina dia manana anjara toerana amin’ny toekarena. Anisan’ny faritra tena mamokatra ovy, geranium, mananasy, ravintsara ary mpiompy omby ity distrika ity.
Raharaham-pirenena Iza no ho praiminisitra ?
Nanatitra ny taratasy fametraham-pialany sy ny governemanta tarihiny teny amin’ny lapan’Iavoloha omaly 18 jolay maraina ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Atoa Ntsay
Voararan’ny lalàna ny fitokanan-javatra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fampielezan-kevitra tahaka izao. Na tsy tena fitokanana aza ny nataon-dRajoelina tany Tsiroanomandidy ny alakamisy 16 mey teo,
dia mitovitovy amin’izay ihany ilay fanombohana ny tetikasa fampiasana “puce électronique” hapetaka amin’ny omby. Tsy ilay tetikasa no ratsy fa ilay fotoana nanaovana ilay hetsika. Tsy afaka niandry fotoana mba nahavitan’ny fifidianana ve ? Somary nandeha rahateo ny kabary politika milaza fa homeny fanampiana avokoa ny kaominina rahetra na menamena na mangamanga na mavomavo ny loko politikan’ny ben’ny tanàna. Mifanohitra tanteraka amin’ny fihetsiny ara-politika io satria raha tena mipetraka ho filohan’ny Malagasy rehetra sy tsy manao tombo sy hala izy tsy nanaiky velively ireo kandida depiote tohanany hialokaloka amin’ny anarany. Mikasika io tetikasa io dia tao Tsiroanomandidy tokoa ve no toerana tena mety sy tsara indrindra nanaovana izany ? Ny faritra Bongolava mantsy dia nampanao sy nampandresy ny “tsia” tamin’ny fifidianana ilay lalàmpanorenana petatoko tamin’ny taona 2010. Anisan’ny kianjan’ny antoko TIM sy handreseny hatrany amin’ny fifidianana ka ezahina halaina ve ny fon’ny olona hampandany ny kandidan’ny IRD ? Nahatalanjona ny nahita an’Atoa Haja Ramaherijaona kandidan’ny IRD nilahatra tamin’ireo manampahefana ambony tao an-toerana izay nifandray tanana tamin’ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina. Nialoha iny, dia efa nisy ny fitokanany ny Kianjan’ny Elgeco Plus, izay an’ny sehatra tsy miankina izay kandida depioten’ny IRD ihany koa no tompon’andraikitra. Raha ny satany manokana dia depiote teo aloha, ary mbola kandida saingy navela malalaka hilahatra tamin’ireo olom-panjakana ara-dalàna. Azon’ny tompon’andraikitry ny arofenitra natao tsara ny niteny sy nanala azy am-panajana, mba hialana amin’ny endrika fitanilan’ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin’ny politika kanefa niniana nikipiana. Ny andininy faha-49 amin’ny lalàmpanorenana dia mandrara ny filoha tsy hanafangaro ny asany amin’ny raharaham-pifidianana, raharahan’antoko,… saingy mampanahy ny zava-misy satria miendrika propagandy ankolaka.